खाद्य बजार नियमनमा सुधार आवश्यक
प्राय: कुनै न कुनै रुपमा समाचार वा हल्लाको विषय बन्ने तर कहिल्यै आशातित सुधार नभएको क्षेत्र हो खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर । खाद्य बजारमा स्वच्छता कायम गर्नका लागि बनेको ऐन कानुन पनि छन्, सरकारी नियामक निकाय पनि छन्, सञ्चारमाध्यमले पनि खबरदारी गरेकै छन्, उपभोक्तावादीले चर्को स्वरमा आवाज उठाइरहने क्षेत्र यही पनि हो ।
विश्व मौरी दिवस (मे २०, २०१८) मा चीनको ग्रामीण क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकन गर्ने अवसर मिल्यो जुन विरलै मिल्ने गर्दछ । चीनको सुदूर दक्षिणमा रहेको हाइनान प्रान्तको छ्यङचोङ काउन्टीमा पर्ने जाहान गविसमा गराइएको यस भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य चीनमा अवलम्बन गरिएका ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरुका कारण गरिवी निवारण र महिला सशक्तिकरणमा भएको उत्साहपूर्ण सकारात्मक परिवर्तनबारे विश्वका अन्य मुलुकका प्रतिनिधिहरुलाई देखाउनु रहेको थियो ।
ईतिहास : लखन थापाअघि नै मगर विद्रोह
लखन थापा मगरले ब्यवस्थित सशस्त्र विद्रोहको तयारी गरिरहेका थिए । उनले जंगबहादुर राणाको हत्या गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । तर, उनीसहित सात जना विद्रोहीलाई जंगबहादुरकै आदेशमा वि.सं. १९३३ साल फागुन २ गते गोरखा, बुङ्कोटको काउले भागारमा झुण्ड्याएर मृत्यूदण्ड दिइयो । उनी नेपालको प्रथम शहीद घोषित भइसकेका छन् ।
जेष्ठ १९, २०७५
सबैका मनमनका राजा
ऋतु अनुसार नेपालमा जेठलाई सबैभन्दा उराठदाग्दो महिनाको रूपमा लिइन्छ । त्यसमा पनि २०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा एक अकल्पनीय घटनामा राजा वीरेन्द्रको देहावसान भएपछि त नेपालको इतिहासमा यो महिनालाई अशुभ महिना हो कि भन्न पनि लाग्छ ।
यसरी हुन्छ जलविद्युतबाट कर्णालीको विकास
विद्युत विकास विभागको सबैभन्दा पछिल्लो आंकडा अनुसार कर्णाली प्रदेशमा केवल ३.६ मेगावाटको आयोजना संचालनमा रहेको छ । करिब ४२०० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु सर्वेक्षणको चरणमा छन् ।
अमेरिका बस्नेले भन्दैमा किन विश्वास गर्नु ?
भोजपुरी भाषामा एउटा उखान छ, "जिन्दगी झण्ड बा, फिर भी घमण्ड बा" अर्थात एकथरी मान्छेहरु यस्ता हुन्छन् कि उनीहरुको जिन्दगी बर्बाद हुँदा पनि घमण्ड भने एक रत्ति कम हुँदैन ।
मधुमास वरपरको कम्युनिस्ट सरकार
राजनीतिमा सय दिन पनि विशेष समय मानिने मान्यताका आधारमा नयाँ सरकारको कार्यक्रम, राजनीतिक प्रतिबद्धता, कार्यशैली र सामथ्र्य चिन्ने अवसरका रूपमा लिइन्छ ।
कुन बाटोमा वाम सरकार ?
सत्तारुढ दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेर एकीकृत नेकपा बनेसँंगै राजनीतिक परिदृश्यले निक्कै भिन्न, नयाँ, रोचक र रोमाञ्चक मोड लिएको यथार्थ मान्नैपर्छ । यो एकतासंँगै राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नयाँ आयाम थपिएको छ ।
बिमा नवीकरण समस्या
बिमालेख व्यतित हुने अनुपातले बिमितको सन्तुष्टिको स्तरलाई इंकित गर्छ । त्यसैकारण यो अनुपात बिमा उद्योगकै लागि मुख्य मुद्दा तथा सरोकारको विषय हो ।
के गणतन्त्र असुरक्षित छ ?
गणतन्त्र स्थापनायता १० वर्ष व्यतीत भएका छन् । यसबीच यसको स्थायित्वलाई लिएर उठ्ने गरेका थुप्रै आशंका हटेका छन् । यद्यपि असहज परिस्थितिबीच संविधान जारी गरिएका प्रसंग र त्यससँगै भारतद्वारा लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी सदैव स्मृतिमा रहिरहनेछन् ।